Superman lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Superman lalao an-tserasera
ho lasa mpiady be voninahitra, ny hafahafa mpanavotra mety resy olo-mahery, ary manampy maimaim-poana amin'ny aterineto lalao Superman. Niakanjo akanjo manga miaraka amin'ny famantarana S sy ny fampandrosoana lamba mena aoriana, fanatanjahan-tena ary afaka tsara hanadihady ny zava-misy, dia tsy misalasala Superman rehefa misy ao loza sy harefo hamonjy ny vidin'ny amin'ny fiainany. Miaraka aminy dia ho nilalao, miady ho amin'ny fahadiovan'ny ny tontolo virtoaly ny mpanao heloka bevava. Puzzles, indray mandeha manampy azy ireo, mampiseho ny fotoana feno herim-po sy potika ny fahavalonareo izay tsy maintsy hilalao, Ary manarakaraka Superman sy ny endri-tsoratra, no hanao Super mahery fo.
Lalao Superman tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Superman lalao an-tserasera
Ny Incredibles: fahavaratra ny andro
Spider-Man: Aza kivy
Superman Ary Green Kryptonite
Find Azy Ireo Superheroes
Batman vs Superman Difference
Justice League Action Orbital hividy
Akanjo ny olo-mahery
Ny Tsy Rariny Andriamanitra eo anivontsika
Hero Team ady
Super mahery fo
Akanjo The Dark Knight
Superman Lehilahy Steel
Z - Maine
Spider-Man: Super Ady
Iron Man 3: Ny mahagaga nifandimby
Superman: Zavatra tsy ny tafo tanimanga
Superman mitady abidy
Manangona ny sarin'i Superman
Ataovy ny tafo tanimanga: Superman
Superman: Puzzle 2
Zavatra tsy anjara: Superman Foko Car
Toerana ny hafa, Superman
Adventures ny Superman
Dress ny supergirl
Justice League: Fanabeazana
Superman niverina: Aoka izay! Tsindrio!
Superman: Ny fiainana dia vahiny
Jetpack Jona sy ny Tower of Power
Batman Ankoatra ny: Return Of The Joker
Batman Anlimited: Mahatsiaro tena
Ny mamirapiratra farany
Mpifanaraka amin'ny Story League
Farany Superman lalao an-tserasera
Velomy ny alalan'ny The Sky
Games Superman dia tsy ho very ny dehibe
Lalao Online Rehetra Superman lalao an-tserasera
Ny tantaran'ny olo-mahery lehibe
Superman efa hatramin'ny ela be herim-po ny mahazatra izao tontolo izao. Io no ilay Super voalohany mahery fo, izay nanome tosika ho amin'ny fampandrosoana ny taranaka iray manontolo ny endri-tsoratra hafa. Tamin'ny voalohany, izy dia mahery fo Sariitatra, fa nahazo antony tsikelikely onjam-peo serials, film sy ny boky aman-gazety, ary ankehitriny milalao lalao Superman, ary mandray anjara amin'ny rehetra ny niainany amin'ny olona.
Superman namorona: ny mpanakanto sy ny mpanoratra Joe Shuster Jerry Siegel, raha mbola mpianatra maitso. Ny asany tamin'ny 1938 izy ireo mpivaro-bary tamin'ny DC Sariitatra, ary ny volana Jona taona iny ihany, ilay gazety dia namoaka tantara mikasika ny Superman. Blue LaTeX akanjo, mena Cap sy fampandrosoana ny taratasy « S » eo amin'ny vata, dia nanjary fantatra manerana izao tontolo izao. Rehefa nisy hanahaka, namorona ny Super mahery fo, dia natsangana sy ny toetry ny akanjo, miovaova ihany ny sasany tamin'ny antsipirihany sy ny loko.
Ny tantaran'ny Superman ny rainy dia manomboka rehefa – mpahay siansa avy amin'ny planeta Krypton, hanitrika ny zanakao ao amin'ny sambon-danitra ary nandefa azy ao amin'ny maizina nandritra ny roa segondra, mandra-pahatongan'ny fotoana ny planeta, rehefa nisy intsony. Kid naka eto amin'izao tontolo izao fianakavian'ny tantsaha ao Kansas sy ny nanangana, nitsangana toy ny zanaka, niantso Ken Clarke. Clark hita ny fahaizany toy ny zaza, fa ny hampiasa azy ireo mba hamonjy ny olona rehefa nanapa-kevitra matotra. Pitondran-tena ambony fitsipika izay ray aman-dreny tsikelikely tao aminy, nahatonga azy ho mora tohina sy manaiky ny alahelo, ary tsy brooked tsy rariny. Fa izy, koa, mila mandoa ny faktiora, fa noho izy velona sy miasa ao amin'ny Metropolis – ny noforonin'ny eritreritra tanàna, ka miasa amin'ny taratasy « Daily Planet ».
Eny ivelany dia ny toetra sy ny fahaizana ny Superman imbetsaka nanohitra fanitsiana avy amin'ny mpanoratra. Ohatra, ny fahafahana manidina, dia nahazo afa-tsy tamin'ny 1940, ary manao ny planeta Krypton, ny tena tanindrazany, dia nanapa-kevitra tamin'ny 1949. Tamin'ny 1980, ny Journal of DC Comics nanapa-kevitra ny nanatsotra somary, ka dia ho lojika kokoa sy tsotra. Editorial nandalo tantara rehetra Super mahery fo, aza miafina, ary Superman. Bern natsipin'i manohana litera maro, anisan'izany Supergirl sy Superboy, misy tetika efa nandalo koa ahodiny fampihenana sy ny fanovana natao tamin'ny hanjo Clark ny ray aman-dreny nitaiza.
koa, tamin'ny 1992, ny mpanoratra handeha hanao dingana ifotony, ary nanapa-kevitra ny hamono Superman. Tsy mahagaga raha ho toy izany nandritra ny taona maro, dia reraka ny manoratra ho traikefa nahafinaritra vaovao, fa noho izy ireo mamono Olona ny Fara Andro tanana mahery fo. Mazava ho azy fa ny olona tsy te-haka toy izany kosa ny zava-niseho sy nangataka ny fiverenan 'ny sampy. Tamin'ny 1996 dia tonga marina ny nofinofiny – ny mahery fo dia teraka indray, ary na dia nanambady Lois Lane. Ny fiainana feno Superman:
Fa ny namany koa. &Nbsp;
Miroboka ao anatin 'lalao Superman
Tamin'ny vao nanam-potoana, tiany lalitra ny fiainana manokana, ny asa ary mifandray amin'ny olona fotsiny izay mahafinaritra ho azy. Isika hahatakatra tanteraka ny hanam-paharetana mba hanomboka ny hamonjy asa, ka noho izany handehanany any amin'ny asa voalohany sy manampy ny mahery fo maneho rockfall, izay namely Megapolis Superman milalao lalao maimaim-poana. Dia latsaka avy tany an-danitra vatobe lehibe, ary tsy maintsy hisambotra azy. Fa tandremo, fandrao azon'ny kryptonite izay tsy mitondra na hevitra, fa Mora manaisotra hery. Indray mandeha koa, ny tanàna hahantonay hafa mampidi-doza – tia ady fananiham-bohitra ny robot. Ny miaramila rehetra ireo no mahatonga ny Metropolis, ary afaka mijanona ihany Superman azy ireo miantso vonjy ny heriny rehetra ka niditra tao an-masiaka ady amin'ny vy zavatra izay tsy mahalala ny famindram-po, ary vonona ny handrava ny zava-drehetra nefa tsy niala ny vato teo amin'ny tany.